अन्ततः रेटिनेमा परे आनन्द
Saturday, 8 Jun, 2019 10:07 AM
जात, भूगोल, नातापाता र सँगै काम गर्दाका हिसाब–किताबले कस्ता–कस्ताको भाग्य बल्ने र कस्ता–कस्ताचाहिँ ओह्रालो लाग्ने अवस्था सिर्जना हुँदोरहेछ । जंगी अड्डाले हालै तयार पारेको बढुवाको सिफारिस हेर्ने हो भने यो कुरा छर्लंग हुन्छ ।
प्रसंग फेरि जोडिन आउँछ, दरबार हत्याकाण्डको । त्यसबेला राजा वीरेन्द्र, युवराज दीपेन्द्रहरुको सुरक्षा व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको भन्दै सबै अंगरक्षकलाई बर्खास्त गरिएको थियो । तर, त्यही घटनामा परेर पनि एडिसीबाट नतानिएका व्यक्ति यतिबेला पुरस्कृत हुँदैछन् । बिहेको मामिलामा बाबुआमाले भनेको नमानेर दीपेन्द्रले निहुँ खोजेमा अधिराजकुमार धीरेन्द्रको जस्तै पदवी खोसेर भाइलाई राजगद्दीको उत्तराधिकारी बनाउने भनी धम्कीको मोहरा बनाइएका अधिराजकुमार निराजनका तत्कालीन अंगरक्षक मधुकर कार्की अहिले बढुवा सूचीको १ नं. मा परेका हुन् । हाल अमेरिकाको वासिङ्गटन डिसीस्थित नेपाली दूतावासमा सैनिक सहचारीको रुपमा कार्यरत छन् ।
संयोग कस्तो भने, त्यहीँ कार्यरत राजदूत अर्जुन कार्कीको पूर्वेली नाताभित्रैका पर्छन् । अर्जुनको पनि भर्खरै म्याद थपिएको छ । स्नातकको शैक्षिक योग्यता गड्बड भए तापनि खरिपाटीको जाँचलाई लट्टिपट्टी पारेर मान्यता दिलाउन सफल मधुकरलाई यस्तै भनसुन र कनेक्सनका कारण अघि बढाइएको हो ।
अर्को रोचक संयोग के पनि छ भने, विभिन्न देशमा तैनाथ नेपाली सैनिक सहचारी (महासेनानीहरु) बढीमा एकतारे जर्नेल भएर घर जान्छन् । मधुकरमात्र त्यस्ता भाग्यमानी हुन्, जो अबको सात वर्षपछि स्वतः प्रधानसेनापतिको लाइनमा उक्लिनेछन् । उनलाई ज्ञानेन्द्रले दरबार हत्याकाण्डपछि आफ्नो एडिसीमात्र बनाएनन्, उच्चस्तरको तालिमका निम्ति बेलायत पनि पठाए । मधुकरले एनडिसी कोर्ष गरेका छैनन् । यदि यही हिसाबले बढुवा भयो भने सम्भवतः अमेरिकाबाट फर्किएर माथि उक्लिने अवसरका निम्ति विदेश जानेछन् । दोस्रो नम्बरमा बढुवा सिफारिस भएका सुनील श्रेष्ठ हावाहुरीले ध्वस्त भएको बाराका बस्ती बनाउन व्यस्त छन् ।
२८ ब्रिगेडका सहायक बाहिनीपति हुन् । घ गुल्म अर्थात् स्पेशल फोर्सका कमाण्डो उनी शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा एडिसी थिए । एनडिसी कोर्षमा जान ठिक्क परेर बसेका छन् । तर, यो बढुवा प्रकरणमा मधुकरको हकमा सेनापतिको केही नलागे पनि उनी आफूले सक्दा कुनै अनियमितता गरेका वा कारवाहीमा परेका प्रति निर्ममताका साथ प्रस्तुत हुने गर्दछन् । जसको घानमा परेका छन्, तीन नम्बर रोलक्रममा रहेका आनन्दसिंह भाट । गणपति छँदा आर्थिक अनियमितता भएको सानो आरोप यतिबेला उनका लागि पासो बनिदियो ।
त्यसरी नै स्टाफ कलेज तालिममा (सी) चार्लीग्रेड नतिजा ल्याउनेहरुलाई पनि हायर कमाण्ड नदिइने नीति बनेको छ । त्यसको मार भोग्दैछन्, वर्तमान प्रधानसेनापतिका भाइ पर्ने (लमजुङे) लक्ष्मण थापा र सुरथ रावलले । यी दुई पनि बढुवाको लाइनबाट झिकिएका छन् । ०७० सालको दशैं, नवमीका दिन भैरवनाथ गणको कोतबाट पूजा गर्न निकालिएको पेस्तोल हराएर कारवाहीमा परेका रघुवरराज थापा पनि बढुवाबाट बञ्चित भएका छन् । अहिले तालिमको सिलसिलामा क्यानाडा पुगेका छन् ।
बढुवाको तेस्रो रोलक्रममा छन्, हेमराज केसी । पाकिस्तानस्थित दूतावासमा सैनिक सहचारीको रुपमा कार्यरत छन् । संकटकालमा सेनाले वीरगञ्जलगायत ६ ठूला भन्सारमा मेजर दर्जाका अधिकृत खटाएको थियो । त्यसबेला उनले यति धेरै पैसा कमाए कि, त्यही कमाईले दुई छोरीलाई भारत, नैनितालस्थित महँगो स्कुलमा पढाए । उनको कमाईको अधिकांश हिस्सा पत्नीले पाँच सय रुपैयाँ पोइन्टको म्यारिज (तास) खेलेर सिध्याएको चर्चा सैनिक अधिकारीबीच हुने गरेको छ । यद्यपि उनी सकारात्मक सोचका र मार्सलआर्टका खेलाडी कर्णेल हुन् ।
बढुवाको अर्को लाइनमा बेलायतस्थित दूतावासमा तैनाथ कुमारबहादुर थापा छन् । उनी पनि केही समयपछि सहायक रथी बनेर त्यही पदमा घर जान्छन् ।
साना माछा त धेरै परे † धेरैपल्ट कारवाहीको शिकार भएर पनि एकतारे, दुईतारे जर्नेलको फुली लगाइसकेकाहरुको हकमा चाहिँ के हुन्छ ? टुंगो लागिसकेको छैन ।